Bakhala ngemali o ‘Ngane Ngane’ | Isolezwe
Bakhala ngemali o ‘Ngane Ngane’
Isolezwe / 27 September 2011, 10:33am / SIZWE BLOSE
ONGANE abaqokelwe kumaSATMA Isithombe:SANDILE MAKHOBA
OSOMAHLAYA abazakhele udumo ngokuqhulula amahlaya eWorkshop eThekwini bathi bakhathele wukusetshenziswa bangakhokhelwa, manje sebefuna ukukhokhelwa ngomsebenzi wabo.
USimlindile “J Lo” Jama noS’boniso “Gab” Mpungose abadume ngelika “Ngane Ngane” bathi abahleli bemicimbi sebebaqedile bedlala ngabo ngoba bavele bathi babanika ithuba lokuthi nabo bazophusha kodwa bangabaniki nesenti.
“Sesiphushe kakhulu, sizoze siwe phela manje. Umuntu ufika kithina athi uyawuthanda umsebenzi wethu aze asimeme nasemcimbini awuhlelile. Ekugcineni uzwa sekuthiwa besingaqashiwe kodwa besinikwa ithuba lokuzikhangisa,” kuzikhalela uJ Lo.
UGab uthe sebeke bahlekisa uMengameli Jacob Zuma noNgqongqoshe wezeMfundo ePhakeme uDkt Blade Nzimande. Uthe kweminye yemicimbi banikwa imali encane ngalo belu igama lokuthi “bayaphusha”.
“UMsholozi wayezifaka ezikhipha izibuko simkitaza kanjalo noBlade Nzimande kodwa uma sekumele kukhokhwe kuthiwe siyaphusha,” kusho uGab.
Uthe kade babekhohliswa ngaleli gama.
Ube esencoma uLwazi Nqetho weShadows eClermont athe yena wavele wakubeka kwacaca ukuthi ngeke abakhokhele, yibona okufanele bakhokhele yena. UGab uthe sekungowesithathu lo nyaka benza amahlaya. Uthe kungani pho kulokhu kuthiwa bayaphusha?
“Kanti sizophusha kuze kube nini? Siqokiwe kumaSouth African Traditional Music Awards, siqhudelana nezinkakha endimeni yamahlaya kodwa kuthiwa sisaphusha,” kusho uGab.
U-J Lo ube esecela abantu ukuthi babavotele njengoba beqokiwe. Ubavotela ngokuthumela amagama athi “Satma best indigenous comedian” enombolweni ethi 34066.